27 ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်မယ့် Xiaomi ရဲ့စမတ်ဖုန်းအသစ်က ဘာဖြစ်မလဲ ?
26 Feb 2018 . 12:13 PM
Mid-Range ဖုန်းတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ တရုတ်နဂါးကြီး ဟာ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ High-End ဈေးကွက်ဘက်ကို ပြန်လည်ခေါင်းလှည့်လာတော့မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ Xiaomi ဟာ Low Budget စမတ်ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Mi 5X ၊ Redmi5Series နဲ့ Redmi Note 5/ 5a တို့ကို ခပ်စိတ်စိတ်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ 2018 အတွက် Flagship ဖုန်းတစ်လုံးကို မိတ်ဆက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဖုန်းဟာ Mi7ဖြစ်မလား Mi Mix 2s ဖြစ်လာမလားဆိုတာ ဇဝေဇဝါဖြစ်အောင်လုပ်ထားခဲ့ပြီး ဒီကနေ့မှာတော့ Xiaomi ရဲ့တရားဝင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Mr.Donovan Sung ကတိကျတဲ့သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ။
Donovan Sung ရဲ့ပြောကြားချက်အရ ဘာစီလိုနာမှာကျင်းပနေတဲ့ MWC 2018 မှာ Xiaomi အနေနဲ့ Mi Max 2s ကို ၂၇ ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်သွားမယ်လို့သိရပြီး အဆိုပါဖုန်းမှာ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 845 Chipset ကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ Samsung ပြီးရင် ပထမဦးဆုံး 845 Chipset ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုထားတဲ့စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးအဖြစ်တွေ့မြင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်တလောထွက်ပေါ်လာတဲ့ ကောလဟာလတွေအရ Mi Mix 2s မှာ 5.99 လက်မအရွယ် Display နဲ့ Four-Sided Ceramic Body ကိုဆက်လက်အသုံးပြုမယ်လို့မျှော်လင့်ရပြီး တခြားထူးခြားချက်အနေနဲ့ Under Screen Fingerprint Scanner ကိုထည့်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ RAM အနေနဲ့ LPDDR4X 8GB RAM နဲ့ Storage 256GB ပါဝင်နိုင်တယ်လို့သိရှိရပြီး Camera ကတော့ ကျောဘက်မှာ 12 MP ရှိတဲ့ ကင်မရာ နှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီဖုန်းမှာ စာရေးသူအနေနဲ့ မျှော်လင့်မိတာက Camera ပိုင်းပါ။ Dual Camera ခေတ်ဟာ ပြန်ပြီးမှေးမိန်မယ့်အလားအလာရှိနေလေတော့ Xiaomi အနေနဲ့ Camera ကို Google နဲ့ Samsung နည်းတူ AR နည်းပညာ ၊ Dual Pixel နည်းပညာ နဲ့ Lens နည်းပညာတွေကို ကောင်းသထက်ကောင်းအောင်လုပ်ပြီး Single Camera လောကကို တစ်ခေတ်ပြန်လည်ဆန်းသစ်စေဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။
27 ရကျနမှေ့ာ မိတျဆကျမယျ့ Xiaomi ရဲ့စမတျဖုနျးအသဈက ဘာဖွဈမလဲ ?
Mid-Range ဖုနျးတှကေို ဆကျတိုကျဆိုသလို ထုတျလုပျခဲ့တဲ့ တရုတျနဂါးကွီး ဟာ ဒီတဈခေါကျမှာတော့ High-End ဈေးကှကျဘကျကို ပွနျလညျခေါငျးလှညျ့လာတော့မယျလို့ယူဆရပါတယျ။ Xiaomi ဟာ Low Budget စမတျဖုနျးတှဖွေဈတဲ့ Mi 5X ၊ Redmi5Series နဲ့ Redmi Note 5/ 5a တို့ကို ခပျစိတျစိတျမိတျဆကျခဲ့ပွီးတဲ့နောကျမှာ 2018 အတှကျ Flagship ဖုနျးတဈလုံးကို မိတျဆကျဖို့ပွငျဆငျနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဖုနျးဟာ Mi7ဖွဈမလား Mi Mix 2s ဖွဈလာမလားဆိုတာ ဇဝဇေဝါဖွဈအောငျလုပျထားခဲ့ပွီး ဒီကနမှေ့ာတော့ Xiaomi ရဲ့တရားဝငျပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ Mr.Donovan Sung ကတိကတြဲ့သတငျးအခကျြအလကျအခြို့ကိုထုတျပွနျလိုကျပါပွီ။
Donovan Sung ရဲ့ပွောကွားခကျြအရ ဘာစီလိုနာမှာကငျြးပနတေဲ့ MWC 2018 မှာ Xiaomi အနနေဲ့ Mi Max 2s ကို ၂၇ ရကျနမှေ့ာမိတျဆကျသှားမယျလို့သိရပွီး အဆိုပါဖုနျးမှာ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 845 Chipset ကိုထညျ့သှငျးတပျဆငျထားမှာဖွဈတယျလို့ဆိုပါတယျ။ ဒါဟာ Samsung ပွီးရငျ ပထမဦးဆုံး 845 Chipset ကိုအပွညျ့အဝအသုံးပွုထားတဲ့စမတျဖုနျးတဈလုံးအဖွဈတှမွေ့ငျရတော့မှာဖွဈပါတယျ။
လကျတလောထှကျပျေါလာတဲ့ ကောလဟာလတှအေရ Mi Mix 2s မှာ 5.99 လကျမအရှယျ Display နဲ့ Four-Sided Ceramic Body ကိုဆကျလကျအသုံးပွုမယျလို့မြှျောလငျ့ရပွီး တခွားထူးခွားခကျြအနနေဲ့ Under Screen Fingerprint Scanner ကိုထညျ့သှငျးနိုငျတယျလို့ဆိုပါတယျ။ RAM အနနေဲ့ LPDDR4X 8GB RAM နဲ့ Storage 256GB ပါဝငျနိုငျတယျလို့သိရှိရပွီး Camera ကတော့ ကြောဘကျမှာ 12 MP ရှိတဲ့ ကငျမရာ နှဈလုံးတပျဆငျထားမယျလို့ဆိုပါတယျ။
ဒီဖုနျးမှာ စာရေးသူအနနေဲ့ မြှျောလငျ့မိတာက Camera ပိုငျးပါ။ Dual Camera ခတျေဟာ ပွနျပွီးမှေးမိနျမယျ့အလားအလာရှိနလေတေော့ Xiaomi အနနေဲ့ Camera ကို Google နဲ့ Samsung နညျးတူ AR နညျးပညာ ၊ Dual Pixel နညျးပညာ နဲ့ Lens နညျးပညာတှကေို ကောငျးသထကျကောငျးအောငျလုပျပွီး Single Camera လောကကို တဈခတျေပွနျလညျဆနျးသဈစဖေို့မြှျောလငျ့ရပါတယျ။